ဘိုးမင်းခေါင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘိုးမင်းခေါင် (ခ) အောင်မင်းခေါင်
ဘိုးမင်းခေါင် ရုပ်တုကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် အလယ်ပစ္စယံ (နောင်တော်ကြီးဘုရားနှင့် ဓမ္မစေတီကျောက်စာအနီး) တွင် တွေ့မြင်ရစဉ်
အဘ ဘိုးမင်းခေါင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကာလမှစ၍ ယနေ့တိုင် လွန်စွာထင်ရှားသော သာသနာပြုဘိုးတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။  ၁၉၅၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် ပုပ္ပါးတောင်ပေါ်နှင့် အနီးအနားဒေသများတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်လေ့ရှိသည်။ 
ပထမံ ဘိုးဘိုးအောင်ကဲ့သို့ပင် အလျင်းသင့်သလို ဒုက္ခရောက်နေသူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်လေ့ရှိသည်။ မကောင်းသူကိုပယ်-ကောင်းသူကိုကယ်တတ်သည်။ စိတ်ထားကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူများကို အထူးကူညီစောင့်ရှောက်လေ့ရှိသည်။ ဘိုးတော် အောင်မင်းခေါင်ဟူ၍လည်း တစ်ချို့က ခေါ်ကြသည်။ ရတနာသုံးပါး၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အထူးယုံကြည်လေးစားဦးထိပ်ပန်ဆင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားရေးအတွက် တတ်စွမ်းသ၍ အထူးကူညီပံ့ပိုးခဲ့သော ဘိုးတော်ဖြစ်သည်။ စကားပြောရာတွင် ရှင်းရှင်းနှင့်ပြတ်ပြတ်ပြောတတ်သည်။ တစ်ဘဝက ဥက္ကလာပမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ဟုဆိုသည်။ အဘဘိုးမင်းခေါင်သည် ရွှေတိဂုံဘုရားဒကာ ဥက္ကလာပမင်းကြီးဖြစ်သည့်ဘဝတွင် ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦးဘဦးသည် ဥက္ကလာပမင်းကြီး၏ သားတော် မင်းနန္ဒာမင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှင်မွေ့နွန်း နှင့် မင်းနန္ဒာ ဇာတ်လမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာပြည်သူများ ရင်းနှီးသိကျွမ်းပြီးသားဖြစ်သည်။ အနေအထိုင်ရိုးသားသည်။ တိုက်ပုံ၊ စွပ်ကျယ် နှင့် ပုဆိုးကွက်တို့ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဥက္ကလာဦးဘုရားဒကာ ဦးဘဦးနှင့် ဇနီး ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်လှ မိသားစုအား သူ၏ဓာတ်ပုံကို ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးခွင့်၊ ယင်းဘိုးမင်းခေါင်ဓာတ်ပုံများအား မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးသို့ လှူဒါန်းခွင့်ပြုခဲ့သည့်အပြင် အဘ၏ဆံပင်များကိုလည်း ဦးဘဦး+ဒေါ်တင်လှ မိသားစုသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု မြို့မ-မြင့်ကြွယ်က အထောက်အထားများနှင့်တကွ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (အဘ ဘိုးမင်းခေါင်၏ ခွင့်ပြုသော ဦးဘဦး၏ ကင်မရာ နက္ကတစ်၌သာ အဘ၏ ဓာတ်ပုံကို ထင်စေပြီး ထိုစဉ်က ပုပ္ပါးတောင်ပေါ်တွင်ရှိသော၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသော အခြားဘုရားဖူးများ၏ ကင်မရာ နက္ကတစ် တွင်မူ အဘ၏ပုံ ထင်ပေါ်ခြင်း မရှိသည်ကို ဦးဘဦး၏သမီးဖြစ်သူ ယောဂီ ဒေါ်အမာ (ခ) ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းက ကိုယ်တွေ့ပြောပြခဲ့ပါသည်။) တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဦးဘဦး+ဒေါ်တင်လှ လှူဒါန်းခဲ့သော အဘဘိုးမင်းခေါင်၏ များစွာသောဓာတ်ပုံများအနက် ရန်ကုန်မြို့၊ ဘားလမ်းနေ ဗိုလ်မှူးသိန်းထွန်းအိမ်တွင် ၃ ပေ x ၄ ပေ အရွယ်ရှိ အဘဘိုးမင်းခေါင်ပုံသည် ယနေ့တိုင် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးများအကြား ဘိုးမင်းခေါင်သည် အလွန်ထင်ရှားသူဖြစ်ပေသည်။ ဘိုးတော် မယ်တော် (သို့တည်းမဟုတ်) ဝိဇ္ဇာများကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများအနေဖြင့် ဘိုးမင်းခေါင် သည် အလွန်အရေးပါသော ထွက်ရပ်ပေါက်ဘိုးတော်တပါးဖြစ်သည့်ပြင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။ ဘိုးမင်းခေါင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သက်သေအထောက်အထားများကလည်း အထင်အရှားရှိနေသည်က ယင်းတို့ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေ၏။
ရန်ကုန်မြို့ ဝင်ဒါမီယာရပ်ရှိ ဗောဓိကုန်းတွင် ဗောဓိကုန်းစေတီတော်မြတ်ရှိသည်။ ထိုစေတီတော်အတွင်းတွင် ဘိုးမင်းခေါင်အိပ်ခဲ့သော သလွန်၊ ဘိုးမင်းခေါင်အသုံးပြုခဲ့သော ရေနွေးပန်းကန်များနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များက ယခုတိုင်ရှိနေသေးသည်။ ဘိုးမင်းခေါင်သည် ထိုနေရာမှပင် ထွက်ရပ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ ထိုမျှမက ထင်ရှားသော ပုပ္ပားတောင်တော်တွင်လည်း ဘိုးမင်းခေါင်နေထိုင်သွားသည့် နေရာအမှတ်အသားများရှိနေပေသည်။
အမှန်စင်စစ် ဘိုးမင်းခေါင်သည် ပထမံဘိုးမင်းခေါင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမံထွက်ရပ်ဂိုဏ်းကြီ၏ အကြီးအကဲခေါင်ချုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမံဂိုဏ်းဆိုသည်မှာလည်း မြန်မာရာဇဝင်တွင် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းအုပ်စိုးစဉ် အချိန်က အလွန်အစွမ်းထက်သည့် ပထမံဘိုးဘိုးအောင် ပေါ်ပေါက်သည့်အချိန်မှစ၍ ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဘိုးဘိုးအောင်သီချင်းများ ဘိုးဘိုးအောင်ကိုတင်စားသော တေးသီချင်းများ ပေါ်ပေါက်လာသည်အထိ မြန်မာတို့အကြား ဘိုးဘိုးအောင်က ဩဇာကြီးမားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ရတနာသုံးပါးတို့ကိုသာ အထွဋ်အမြတ်ထား၊ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လေ့ရှိတတ်ကြသော်လည်း ဘိုးဘိုးအောင်မရှိသည့်(ထွက်ရပ်ပေါက်ပြီးသည့်) နောက် နှစ်အတန်ကြာတွင် ဘိုးမင်းခေါင်က ဘိုးဘိုးအောင်နေရာတွင် ဝင်ရောက်လာပြီး ဘိုးဘိုးအောင်ကဲ့သို့ပင် လူအများက ဘိုးမင်းခေါင်အား လူကြီးမိဘဆရာသခင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ရိုသေလေးစားအားကိုးမှု ရှိကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရတနာသုံးပါးနှင့် တစ်တန်းတည်းထားပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဘဘိုးမင်းခေါင်၏ ပုံတော်များ၊ ရုပ်တုများကို ရွှေတိဂုံဘုရားစသော မြန်မာပြည်အနှံ့ ထင်ရှားသော တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၊ ထင်ရှားသော စေတီပုထိုးများ၌ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀ဝ ကျော် (ဘီစီ ၅၈၈ ခန့်က) ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က 'အဇိတ' အမည်ရှိ အညတရ ရဟန်းငယ်တစ်ပါးသည်လည်းကောင်း၊ နောင်အခါ ထို အဇိတ ရဟန်းသည် သင်္ကန်းဝတ်မှ ရသေ့ဝတ်သို့ပြောင်းကာ တောထွက်တော်မူခဲ့သော ရှင်ရသေ့ကြီး 'ဒိဗ္ဗစက္ခု'သည်လည်းကောင်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဒါယကာ သိကြားမင်း နှင့်မယ်တော်မယ်လမုတို့၏သားတော် ဥက္ကလာပမင်းကြီးသည်လည်းကောင်း၊ ပုဂံခေတ်ဦး ရှင်အရဟံသည်လည်းကောင်း၊ မွန်ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပု၏ သမက်တော်-ပဲခူး (ဟံသာဝတီ) မွန်ဘုရင် ဓမ္မစေတီမင်းသည်လည်းကောင်း၊ အလောင်းဘုရား ဦးအောင်ဇေယျ၏ သားတော်-ဘိုးတော်ဘုရား (ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း)၏ မြစ်၊ ဘကြီးတော်ဘုရား၏သားတော် စကြာမင်းသားသည်လည်းကောင်း ဘိုးမင်းခေါင်၏ဘဝဟောင်းပုံရိပ်များ ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ 
== အဘအောင်မင်းခေါင် (ဘိုးမင်းခေါင်)၏ ဆုံးမစာ
ပျက်စီးတိုင်းလျှင် မပူပင်နှင့် - မပျက်စီးကာ ခိုင်မြဲပါက ဘယ်မှာ "အနိစ္စ" ရှိမည်နည်း ။ ။
ဆင်းရဲကြုံမူ မညည်းညူ နှင့်- ချမ်းသာချည်းသာ ကြုံနေပါက - ဘယ်မှာ "ဒုက္ခ" ရှိမည်နည်း ။ ။
လုပ်တိုင်းမဖြစ် စိတ်မညစ်နှင့် - ကိုယ်လုပ်တိုင်းသာ ဖြစ်နေပါက- ဘယ်မှာ "အနတ္တ" ရှိမည်နည်း ။ ။
ပြောတိုင်းမရ ဒေါမထနှင့် - ကိုယ်ပြောတိုင်းသာ ရနေပါက- ဘယ်မှာ "အနတ္တ" ရှိမည်နည်း ။ ။
ကြံတိုင်း မပေါက် စိတ်မဖေါက်နှင့် - သင် ကြံတိုင်းသာ ပြီးမြောက်ပါက - ဘယ်မှာ "အနတ္တ" ရှိမည်နည်း ။ ။
အာရုံဟူသမျှ မတောင့်တနှင့် - အာရုံတိုင်းသာ တောင့်တပါက - ဘယ်မှာ "လောဘ" ဆုံးမည်နည်း ။ ။
အရာရာမျိုး စိတ်မဆိုးနှင့် နေရာတိုင်းသာ စိတ်ဆိုးပါက - ဘယ်မှာ "ဒေါသ" ဆုံးမည်နည်း ။ ။
သိဉာဏ် မလိုက် သင်မမိုက်နှင့် သိဉာဏ်မရ မိုက်နေပါက - ဘယ်မှာ "မောဟ" ဆုံးမည်နည်း ။ ။
“ဗုဒ္ဓတရား“ မေ့မထားနှင့် ဆုံးမတိုင်းသာ ကျင့်ကြံပါက ဘယ်မှာ "နိဗ္ဗာန်" ဝေးမည်နည်း ။ ။
↑ pages 174 to180
↑ Real Buddhism & Weizzas - REAL BUDDHISM
↑ The Passing of Sayadaw U Thila Wunta – Derek's Dharma Blog
↑ Dharma Fellowship: Sayadaw U Thila Wunta
↑ (ပေါင်းတည်)၊ တင်တင်ဦး (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ)။ မူလ ဥက္ကလာဦးစေတီအကြောင်း သိကောင်းစရာများ (အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၂) ed.)။ သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း။ pp. ၂၇၂ -၂၇၅။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ ဘိုးမင်းခေါင်ဆိုသည်မှာ ....
↑ အဘအောင်မင်းခေါင် (ဘိုးမင်းခေါင်) ၏ ဆုံးမစာ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုးမင်းခေါင်&oldid=564048" မှ ရယူရန်